Homeसमाचारतु हे’र्नुहोस्, चियावली लाई कडा सुरक्षामा राखेको छु भन्दै आए गजेन्द्र लिम्बु मिडियामा
April 18, 2021 admin समाचार 6377
चियावाली भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चि’त भएकी श्रृष्टिले आफ्नो बारेमा आएको समाचारले आफु’लाई निकै चो ट पुगेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो अतित:का बारेमा अनावश्यक समाचार बनाएर आफुलाई निकै दु’खी बनाएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो विग’तलाई यति धेरै वर्ष पछि छर’पष्ट पारेको भन्दै त्यसले निकै दुखी बनाएको बताएकी छन् । उनले अनायासै आफ्नो तस्बिर सामाजिक स’ञ्जालमा आएपछि यति धेरै चर्चा हुनु सं’योग मात्र भएको बताएकी छन् ।
त्यस पछि युट्युव’रहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत जिवनको बारेमा अनावश्यक कुरा सार्वजनिक गरिएको भन्दै रि’साएकी छन् । उनले भनिन्, म त्यो भिडियो हेरेर घरमा पुगेर यति रोएँ मैले आफैलाई सिध्याउने बारेमा पनि सोचे । मेरो जिव’नका बारेमा त्यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने अधिकार कसले दियो ? मैले के कुरा विर्सन चाहेकी थिए त्यो कुरा मि’डियामा ल्याउने अधि’कार कसले दियो ? मलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मे’वारी कसले लिन्छ ? उनले भनिन् ।
मेरो बारेमा भिडियो आएप’छि र कसैले सामान्य स’हयोग समेत समेत आएपछि आफ्नो वि’गतबारे अनावश्यक समाचार भिडियोमा आएपछि निकै चिन्तित भएको बताएकी छन् । म अर्को दिन चिया प’काउन जान पनि सकिन । मेरो विगत ल्याएर मेरो जि’वनमा किन घाउ थपिदिएको ? उनको भनाई छ । अर्का’को विगतको बारेमा जानकारी लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यो कुरा सकियो । सबै मान्छेको वि’गत हुन्छ ।
उनले यस्ता कुरा सार्व’जनिक हुँदा आफ्नो छोरीलाई पनि नराम्रो असर पुग्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेकी छन् । यस्ता भिडियो सा’र्वजनिक हुँदा आ’एका कमेन्टले झन मलाई दुखी बनायो ? त्यस्तो शब्द कसरी लेख्ने हिम्मत गर्यो ? उनले भनिन्, मैले त्यस्तो कुरा लिएर केही नराम्रो नि’र्णय लिएँ भने त्यसको जिम्मे’वारी कसले लिन्छ ? उनको भनाई छ । इताजा खबरबाट
May 8, 2021 admin समाचार 6223
September 4, 2020 admin भिडियो, समाचार 17598
March 8, 2021 admin समाचार 6685